Home Onye na-ahụ n'anya FOOTBALL Nuno Espirito Santo Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Manager onye kachasị amara aha ya bụ "O Nagide". Nuno Espírito Santo Child Akụkọ ya na akụkọ na-adịghị mma akụkọ Eziokwu na-ewetara gị nkọwa zuru ezu nke ihe omume ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye ọdịnala ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị ọzọ a na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọrụ nlekọta ya na Wolverhampton Wanderers. Otú ọ dị, ọ bụ nanị ole na ole tụlere Nuno Espírito Santo Biography bụ nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na -Ndụ mbido
Malite, aha ya bụ Nuno Herlander Simoes Espírito Santo. A mụrụ Nuno n'ụbọchị 25th nke January 1974 na São Tomé na Príncipe, mba dị n'àgwàetiti Africa nke dị na Equator na Gulf of Guinea, Central Africa.
A mụrụ Nuno dịka nwatakịrị ihere na nwa dị jụụ bụ ndị aha ya nọgidere na-amaghị. Otú ọ dị, ọ na-etolite, ọ chọpụtara na ya nwere ikike dịka ọ na-ekere òkè na asọmpi egwuregwu football Sao Tome. A hụrụ Nuno dịka onye nwere ike ịchọta na onye nwere ume na-achọ inyere ndị ọzọ aka na ọbụna mgbe ọ bụ nwata, ọ pụrụ ịhụ ihe n'emeghị ajọ mbunobi.
Ná mmalite ná ndụ ya mgbe Nuno nọ n'ihe banyere 10, nne ya na papa ya kpebiri ịhapụ Sao Tome. Ndị ezinụlọ Nuno Espirito Santo ga-akwaga na Portugal iji nweta ọnọdụ akụ na ụba ka mma. Mgbe ha rutere nso, ha bi na Santo António da Charneca, bụ ụka dị na Barreiro, Portugal. Nke a bụ ebe ọrụ njem ya malitere n'ezie.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Ọrụ Ndị Ntorobịa
N'afọ 1985 mgbe ọ bụ 11, Nuno malitere ịgba bọl na ụlọ egwuregwu obodo dị na Santoantoniense. Ka oge na-aga, Nuno gara n'ihu ọgbakọ ndị ọzọ. Ndị ọgbọ ya hụrụ ya dịka onye ibe ya nwere obi ụtọ nke ga-adị mfe ịmegharị na ebe ọ bụla ọ na-egwuri egwu.
Ọrụ ntorobịa Nuno bụ nke dị n'etiti 1985 na 1992 na ụlọ ọrụ ndị ntorobịa Portuguese anọ. Mgbe ọ bụ nwa okoro, ọ nwere mkpebi siri ike ime ka nrọ ya ịghọ onye ọkachamara na-eche ihe mgbaru ọsọ mezuru. Nke a pụtara ìhè n'oge ụbọchị ọ na-egwuri egwu Santoantoniense, Quimigal, Caçadores Torrebles na Vitória Guimarães ebe ọ gwụchara ọrụ ntorobịa ya.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Nzukọ Jorgie Mendes
Dị ka n'oge ederede, ndị football na-agbaso egwuregwu ahụ ga-amata njikọ dị n'etiti Nuno na Jorge Mendes. Nke a bụ eziokwu n'ihi na pals abụọ enweghị ihe ọ bụla. Ugbu a ka anyị gwa gị otu ha si zute.
Oge ntụgharị maka nchịkọta nke Nuno na ọrụ nlekọta na-esote na-amalite na nnukwu ụlọ ịgba egwu Portuguese n'afọ 1996. N'abalị a gọziri agọzi, Nuno zutere Jorge Mendes bụ onye na-abụ DJ na-elekọta ụlọ ahịa vidiyo. Mgbe ahụ, ọ na-echeghị banyere ebumnuche nke ịbanye n'ụlọnga ụlọ ahịa football. Oge a bụ mgbe Nuno, onye na-elekọta mgbaru ọsọ 22 nọ na-achọsi ike maka ụzọ isi mee ka ọ bụrụ nnukwu egwuregwu. N'abalị ahụ, mkparịta ụka na-echefu echefu malitere n'etiti Jorge na Nuno bụ ndị na-ezute ibe ha na club.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Ime Mgbanwe Jorgie
Ị maara?… N'abalị ahụ, mgbe ọ kwusịrị okwu banyere ohere, Jorge Mendes chọpụtara ọkpụkpọ ya, ohere na ahịa ụlọ ọrụ football. Nke mbụ, o kwenyesiri ike na Nuno ga-akwụ ya ụgwọ dịka onye mbụ ọ na-azụ ahịa nke o kwetara. Ha abụọ ga-edozi ihe omume ha tupu ha ahapụ ụlọ ịgba egwu.
Na-esote ụbọchị, Jorge mere Nuno maka awa abụọ na ọkara ka Deportivo La Coruna dị na Spen na-agba mbọ izute onyeisi oche nke football. Mgbe ọ bịarutere, Jorge kwenyesiri ike na onyeisi oche nke ọgbakọ na Nuno nwere ikike inye ya ihe mere ụlọ Spanish ji kwesị ịzụta ya. Mgbe nkwurịta okwu nke ọma gasịrị, Deportivo La Coruna nakweere ọrụ ya. Nke a bụ oge Jorge Mendes nwere ihe ọzọ kpaliri ịmepe ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ football nke a mara ugbu a GestiFute. GestiFute bụ otu n'ime ọrụ kachasị mma maka ndị na-agba ụkwụ. Kemgbe ahụ, ha abụọ aghọwo ezigbo ndị enyi.
Dị ka n'oge ederede, Nuno na Mendes na-enwe ọṅụ ọhụrụ na Wolves. Taa, Jorge Mendes enyela ọtụtụ ndị Nuno egwuregwu karịsịa ndị na-agba ụkwụ na Portuguese. Taa, o doro anya na ọ bụ ọkachamara kachasị ike na football ụwa na ndị ahịa nke gụnyere Jose Mourinho, Rui Patricio, Helder Costa, Cristiano Ronaldo, James Rodrguez, João Moutinho wdg
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Akwa Mourinho
Mgbe o jusịrị klas nke 5 na Spanish, Nuno laghachiri Portugal iji sonyere FC Porto. N'ebe ahụ ka ọ ghọrọ Jose Mourinho ezi onye na-eso ụzọ, onye ga-eji obi ụtọ kpoo oche ahụ maka José, ọ ga-eme nke ọma mgbe akpọrọ ya.
Nuno bụ onye a na-akwanyere ùgwù nke òtù Porto, onye Mourinho tụkwasịrị obi. Na Portugal, a kpọrọ Nuno O Substituto nke pụtara "Na-agbanwe". N'agbanyeghị na oche ahụ na-ekpo ọkụ, oge ole na ole nke egwuregwu ya bụ ihe enyemaka Jose Mourinho Porto na-emeri Europe n'oge oge 2003 / 2004.
Nuno dị n'okpuru ebe a meriri Njikọ Njikọ n'okpuru José Mourinho na 2004 dịka onye na-eche nchebe nke Porto.
Na-agbakọta n'Ọrụ Egwuregwu Ya: Nuno mgbe ọ na-ejide ihe mgbaru ọsọ ya kwetara ka ọ nọrọkwuo ọtụtụ afọ na mbinye ego kama ịnọ na-adịgide adịgide na osisi. N'ime afọ 18 na-arụ ọrụ na mba atọ dị iche iche, Sao Tome mụrụ onye na-eche nche na onye isi ugbu a na-egwu nanị 199 ọkụ na 102 nke ndị ahụ na-akwụ ụgwọ na Spanish nke abụọ. Ebe nchekwa ya kachasị dị ka onye nchebe ga-anọgide na-enwe mmeri n'ọgụ mmeri na 2004.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Ọrụ nchịkọta nke mbụ
Mgbe ezumike nká, Nuno malitere ịkwado egwuregwu football na-amalite na Rio Ave. Ekele ya na enyi ya na Jorge Mendes, o biliri ngwa ngwa.
Jorge Mendes site na njikọ ya na mmetụta ya bụ onye na-elekọta ọtụtụ ndị na-elekọta ọrụ ndị nwere ohere. Akụkụ nke atụmatụ ya na-eme ka ndị ahịa ya na-akwụ ụgwọ ịjụ ụlọ ahịa ịzụ ahịa ọ gwụla ma onye nwe ụlọ ọrụ a chọrọ ịhazi ya. Ọ bụ site na nke a na-agagharị Mendes 'nwetara Nuno ọrụ ya na Valencia ebe ọ na-arụ ọrụ na otu n'ime ụmụnna Neville.
A na-akpọ Nuno La Liga Manager nke Ọnwa atọ tupu ikpebie ịgba akwụkwọ na 29 November 2015. Mgbe ọrụ Valencia gasịrị, Mendes nwetara ebe nchịkwa ọzọ maka Nuno na FC Porto. Mgbe oge zuru ezu n'enweghị ọlaọcha, Nuno kwụsịrị ọrụ ya. Ọzọkwa, ọ na-echere ebe nchịkọta ọzọ nke Mendes.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Otú o si ghọọ onyeisi Wolves
Mendes weghachitere ohere iji mee ka enyi ya Nuno gaa Wolverhampton mgbe ya na onye nkụzi Wolves, bụ Paul Lambert, kwụsịrị. Ugbu a, anyị na-agwa gị otu esi mee.
Wolves, bụbu onye isi na-akpọ Paul Lambert, ekweghị na onye na-ahụ maka otu onye omeiwu nke ụlọ ọrụ ahụ (Fosun) na-ahọpụta Mendes ka onyeisi ndị na-enyefe ya.
Lambert ekweghị ka ụlọ ọrụ ahụ na-enyefe ndị uweojii bụ Jorge Mendes, onye bụ ezigbo enyi nke Fosun onye na-akpata ego n'ụlọnga Wolves, bụ onye kpebiri ihe niile ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ.
Ị maara??… Wolves onye nwe obodo China bụ Funso (nke dị n'akụkụ aka ekpe), nyere Jorge Mendes ike ijikwa ma onye ọkpụkpọ na nchịkwa nchịkwa. Omume ọjọọ nke Lambert mere ka ụbọchị ya baa na ụlọ ụlọ etiti.
A kpochapụrụ Lambert na May 2017 n'agbanyeghị na ndị òtù Wolves nwere mmeri na nke anọ nke 2016-17 FA, na-emeri 2-1 megide Liverpool na Anfield. Na 31 May 2017, Nuno Espírito Santo họpụtara dị ka njikwa nke Wolves.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Onye na-enye ndụmọdụ
Ihe omume Nuno mere ọtụtụ ndị Portugal na-egwu egwu n'okpuru Jorge Mendes kwetara isoro Wolves. Ebufe kachasị na-abịa n'oge mgbe Nuno Espírito Santo dugara ụlọ ọrụ ahụ Premier League mgbe afọ isii gasịrị. Nke a mere n'oge mbụ ya dị ka onye isi nchịkwa Wolverhampton.
Ụlọ ọrụ ahụ na-enweta nkwalite ha na egwuregwu anọ dị na oge. A kwadoro ha dị ka ndị mmeri na egwuregwu abụọ iji chekwaa. Mgbe ọ na-akwadebe oge oge egwuregwu nke oge 2018-2019, Jorge Mendes chebere ọtụtụ ndị Portuguese egwuregwu; Diogo Jota, Joao Moutinho, Ruben Vinagre na Rui Patricio n'ime otu.
Njikọ a nke Portuguese mere ka Nuno nwee ihu ọma, onye na-anweteghi iji zoo ụgwọ ya maka ihe ndị dị elu. Nuno dị ka mgbe edere ederede bụ otu n'ime usoro kachasị mma nke egwuregwu na egwuregwu mbụ.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Eziokwu nke Onye
Bruno Alves, bụ onye òtù ọlụlụ nke Nuno n'oge afọ ikpeazụ ya na Porto kọwara ya dịka 'onyeisi na-enweghị onye agha'. Na ntule nke onwe ya, Nuno bụ onye nwere obi ụtọ nke maara otú e si akpali ndị ọrụ ibe ya. Ọ dị njikere mgbe niile ige nti na enyemaka mgbe akpọrọ ya. N'oge gara aga na ọrụ ya, mgbe mmadụ dara, Nuno bụ onye mbụ na-agba ume. Ọ bụrụ na otu n'ime ndị òtù ọlụlụ ya adaala, ọ ga-abụ onye mbụ na-agbalị ịnweghachi ya. N'agbanyeghị ihe a niile, o kwetara ka ọ bụrụ ebe ọ bụ na onye ọzọ na-eche nche na-enwe obi ụtọ.
Ndị ọrụ ibe ya ga-agba ọsọ ọsọ na-anabata Nuno mgbe ha meriri ihe mgbaru ọsọ. José Mourinho mere ka ọ dịkwuo ntakịrị. "Mgbe i nwere Nuno," o kwuru. "I kwesịghị ichegbu onwe gị banyere ụlọ mgbakwasa."
N'ikpeazụ, ụdị àgwà Nuno gosipụtara ya site na ụkpụrụ omume nke o tinyeburu iji merụọ ọrụ ya. Dịka ọmụmaatụ, na 2010, Hulk na Cristian Sapunaru natara ọnwa anọ maka ịlụ ọgụ na ndị na-elekọta ụlọ n'ụlọ ndị ọjọọ Benfica. Mgbe ndị ọzọ na-egwu egwuregwu na ndị nkuzi katọrọ ha, Nuno chebere ndị ibe ya. Omume a mere ka okwu ya; Somos Porto pụtara (Anyị bụ Porto).
"Ọ dịghị onye ga-eme ka anyị gbanwee ụzọ anyị," ọ na-atụgharị. "Ọ dịghị onye ọ bụla, enweghị ikpe na-ezighị ezi nke na-ewepụ njikọ anyị. Anyị bụ Porto na anyị ga - anọgide "
Iji Nuno, ikike na ihe ọjọọ nke ihe ahụ merenụ bụ nke abụọ. Ichebe otu na iguzo ọtọ maka ndị òtù ya bụ ihe niile dị mkpa n'obi ya.
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Ezughị okè
N'agbanyeghi na otutu ndi mmadu n'aha aha ya, Nuno egosiputa uzo ezighi ezi na olulu. Nke a mere mgbe ọ kpasuru Neil Warnock iwe, bụ onye na -ihere'. Note: Tupu nsogbu ha, Warnock nwere obi ụtọ inwe Nuno na Cardiff.
Lee ka o si mee! A na-enwe nkụda mmụọ n'otu oge mgbe ọ na-atụfu oge ezumike abụọ ya na òtù Cardiff ya bụ ndị nwere otu ihe mgbaru ọsọ ruo n'akụkụ nke Nuno. Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, Nuno na-enwe obi nkoropụ karịa onye na-atụgharị aka ya na ndị ọrụ ya banye na pitch na-eme ememme dị ka a ga - asị na ọ ka meriri otu FIFA World Cup.
Mgbe o kwetara na ya ezighị ezi, Nuno gbagara Walnock na-ewe iwe maka aka aka, n'oge a ka oge na-aga. Ọ hụrụ 69 na-alụ ọgụ na-enweghị obi ụtọ ịnabata ya. Mgbe ahụ, a na-ahụ ọkụkụ ugboro ugboro na-egosi Nuno f ** k.
Lelee vidiyo nke mwakpo ahụ n'okpuru;
Otú ọ dị, Nuno ka na-arịọ mgbaghara mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, na-ekwu na obi ya dị ya mma. Ọ gwara ngwa ngwa ka ndị nta akụkọ banyere ịga ịhụ onye iwe iwe ahụ ọ kpasuru iwe. Mgbe ọ nụrụ okwu ahụ, Warnock zara site n'ikwu, sị:
"Anaghị m enye F ** K ihe Nuno na-ekwu. Agaghị m anabata mgbaghara ya. Ọ bụ enweghị akwụkwọ na mkparị niile. M na-eji okwu siri ike eme ihe nakwa na m bu n'uche nke ọ bụla n'ime ha. Ọ ghaghị ịmụta na na football football ị nwere àgwà na otu klas mgbe ị meriri egwuregwu. Echeghị m na m ga-abanye n'ọfịs m ruo mgbe ọ nwụsịrị. Achọghị m ịhụ ya n'abalị a ma ọ bụrụ na m na-eme ihe n'eziokwu. Echere m na ọ bụ egwuregwu dị egwu, ọ dịghịkwa mkpa ịkwụsị ya. "
Nuno Espirito Santo Child Story Plus Na - Ndụ mmekọrịta
Peharbs, ọtụtụ ndị football Frog jụrụ ajụjụ ahụ; Ònye bụ Nuno Espirito Santo nwunye ma ọ bụ enyi nwanyị?. Eziokwu ka a gwara, n'oge edere akụkụ a, ndụ mmekọrịta nke Nuno na ibe ibe ya anaghị enwe ozi ọ bụla gbasara ndụ ya.
Dị ka n'oge edere isiokwu a, Onye aka kwadoro na enweghi ihe ndekọ banyere ndụ mmekọrịta nke Nuno Espírito Santo.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Nuno Espirito Santo Akụkọ nke gbasara akụkọ na-adịghị mma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Ignatius Jacob Machị 17, 2019 na 12:45 pm
Nuno masịrị m na usoro ịgba chaa chaa ya nke ọma .N'ụzọ egwuregwu FA na - eme nkeji iri na ise megide Manchester jikọtara ya nkwenkwe m. Ụzọ wolf na-egwuri egwu bụ nnọọ ihe pụtara ìhè na ha dị nnọọ mkpa iji merie. Obi ụtọ m nwere maka Nuno na ndị ọrụ ike ya. Ọ bụ ezigbo onye njikwa, ezigbo onye na-akpali akpali na onye nkụzi. Ọchịchọ m kacha mma maka inwekwu ọganihu.